I-Bangood: VOYO I8 Max ithebhulethi ye-Android ngesaphulelo | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Izixhobo ze-Android, Amacwecwe e-Android
Imakethi yethebhulethi ayikaze igqibe ukususa, nangona sifumana uninzi lweemodeli ezinomdla kuzo. Ke, ukuba ucinga ukuthenga ithebhulethi, eli nqaku ngokuqinisekileyo liya kukunika umdla kakhulu. Njengoko sazisa i-VOYO I8 Max. Ithebhulethi epheleleyo ye-Android, ene-10.1-intshi yesikrini kwaye ngoku unesaphulelo eBanggood.
IBanggood yenye yezona venkile zithandwayo namhlanje. Ngokukodwa idume ngokuthenga iimveliso zorhwebo zaseAsia. Ngoku, basizisela le VOYO I8 Max, ithebhulethi enkulu enesaphulelo.
Sijongene ne-2 kwi-1 yezona zinto zigqibeleleyo neziguquguqukayo. Kuba sinokuyisebenzisa ukusebenzisa umxholo wemultimedia. Ke siyakwazi ukubona uthotho lwethu oluthandayo okanye iimovie. Kodwa enkosi kwikhibhodi yeBluetooth ebandakanya oko, sinokusebenza okanye senze imisebenzi efana nokuhlela imifanekiso okanye iividiyo. Kuba kufuneka sibonise Isikrini se-intshi esingu-10,1 sale VOYO I8 Max.
Ukukunika umbono opheleleyo, sikushiya ngeenkcukacha ezipheleleyo zethebhulethi:
Ukucaciswa kobuchwephesha i-VOYO I8 MAX
Umzekelo I8 MAX
Inkqubo yokusebenza 7.1 Android OS
Isikrini 10.1 intshi
Inkqubo IHelio X20 i-Deca-core
Ukugcinwa kwangaphakathi 64 GB
Ikhamera esemva 12 MP
Ikhamera yangaphambili 3 MP
Ezinye izinto Iskena seKhadi leKhibhodi yeBluetooth
Ubukhulu 246x170 x9 mm
U bunzima I-580 gram
Le VOYO I8 Max yithebhulethi efanelekileyo kuzo zonke iintlobo zeemeko. Kuba ukuba kufuneka usebenze kulula kakhulu, zombini ngekhibhodi kunye nesitayile esinethebhulethi. Ke ungabhala, uhlele amaxwebhu okanye imifanekiso okanye ulungiselele iintetho. Ke yonke into oyifunayo kufuneka uyenze ngokubulela kule modeli. Yintoni egqithisile, Ibhetri yayo ye-5.000 mAh kufuneka ibalaselisiwe. Ke iya kukunika inkululeko eninzi, ukuze uyisebenzise imini yonke.
I-Banggood isizisela le VOYO I8 Max ngexabiso elikhulu lama-euro angama-188,48. Alithandabuzeki elokuba lixabiso elikhulu kwithebhulethi epheleleyo enokusebenziseka kuzo zonke iimeko. Unomdla kwithebhulethi? Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nale modeli okanye uqhubeke nokuthenga, ungayenza kwezi zilandelayo unxibelelwano.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Amacwecwe e-Android » I-VOYO I8 Max: Ithebhulethi epheleleyo ye-10-intshi kwisaphulelo eBanggood